ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်တွေမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံး လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများ (၁)
25 Apr 2019 . 5:31 PM
လူငယ်ကစားသမားတစ်ဦး ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ တောက်ပလာဖို့ဆိုတာက စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဖိအားတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင်ရသလို ပွဲတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင် ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ကျော်လွှားနိုင်မှဖြစ်မှာပါ။ အရည်အသွေးရှိပေမယ့် ဒဏ်ရာပြဿနာ၊ ကွင်းပြင်ပ လူနေမှုအကျင့်စရိုက်၊ ပုံမှန်ခြေစွမ်းမထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်သလောက် ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ အခုဖော်ပြချင်တာက အသက်(၂၁)နှစ်မပြည့်ခင် ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၅)ခုမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်လဲ၊ ကိုယ်ထင်တာနဲ့ ကိုက်ရဲ့လားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေ အများကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေအပြင် ပြည်ပကလပ်တွေကနေ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်း စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ အသက်(၂၁)နှစ်မပြည့်ခင်မှာ လိဂ်သွင်းဂိုး (၁၄)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့သလို မန်ယူအသင်း ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး ရွန်နီ Wayne Rooney ဆိုရင် (၄၄)ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ လူကာကူ Romelu Lukaku ၊ အနယ်လ်ကာ Nicolas Anelka ၊ ခရစ္စဆပ်တန် Chris Sutton စတဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေကလည်း လူငယ်ကစားသမားဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ အသက်(၂၁)နှစ်မတိုင်ခင် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာက လီဗာပူးလ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး ရော်ဘီဖောင်လာ Robbie Fowler ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ Deadliest Strikers တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဖောင်လာဟာ အသက်(၂၁)နှစ်မတိုင်ခင် ၁၉၉၃ ကနေ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အတွင်း သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးအရေအတွက်က (၆၄)ဂိုးအထိရှိခဲ့တယ်။ ဒီစံချိန်ကို ဘယ်သူမှ မချိုးဖျက်နိုင်သေးဘဲ အနီးစပ်ဆုံးတူညီခဲ့တာက သူ့ရဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဖော်ဟောင်း အိုဝင် Michael Owen ဖြစ်ပြီး (၅၅)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၂၁)နှစ်မပြည့်ခင် လာလီဂါမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ။ ရီးယဲလ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ လာလီဂါကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်လို့ ဒီစာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဆို မက်ဆီ Lionel Messi လို့ ပရိသတ်တွေ ထင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘ၀ အစောပိုင်းမှာ မက်ဆီက တောင်ပံတိုက်စစ်အဖြစ် ကစားခဲ့ရတာကြောင့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးလို ဂိုးတွေ သိပ်မရခဲ့ဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မက်ဆီ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာက ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ (၁၄)ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ တောရက်စ် Fernando Torres ၊ အဂွဲရိုး Sergio Aguero တို့ကလည်း အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်တွေဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ အသက်(၂၁)နှစ်မတိုင်ခင် လာလီဂါမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာက ရီးယဲလ်အသင်းဂန္ထ၀င် တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ် Raul ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီ-စီရော်နယ်လ်ဒိုခေတ်မတိုင်ခင် လာလီဂါရဲ့ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရာအူးလ်ဟာ အသက်(၂၁)နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲ လာလီဂါမှာ (၅၉)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒါကတော့ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၅)ခုမှာ အသက်(၂၁)နှစ်မပြည့်ခင် သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအပိုင်း(၁)ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး . . .
Photo:Read Liverpool,Europa Press,Match of The Day Unofficial